Cabirka SCB: xisbiga S oo taageeradiisu kor u kacday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cabirka SCB: xisbiga S oo taageeradiisu kor u kacday
La daabacay tisdag 31 maj 2016 kl 10.45
Kristdemokraterna oo hoos u dhacay halka Socialdemokraterna kor u kaceen sida ay muujiysey cabiraada taageerada xisbiyada oo xaafiska SCB sameeyey. sawir: Jonas Ekströmer, Erik Nylander TT Grafik: Liv Widell/Sveriges Radio
Xisbiga Kristdemokraterna ayaa helay taageeradii ugu hooseysay tan iyo markii xaafiiska dhaxe ee tirkoobka SCB bilaabay cabirada taageerada xisbiyada sannadkii 1991. Kristdemokraterna ayaa heaysta taageero ka hooseysay boqolkii 3,1 cabiraada SCB maanta shaacisay.
Infographics: Liv Widell, Ekot
xisbiyada laysku yuiraahdo gadud cagaarka oo kale ah Socialdemokraterna, Miljöpartiet iyo Vänsterpartiet ayaa isku geyn heysta taageero gaarissan boqolkii 41 codbaxiyaasha Sweden, halka xisbiga laysku yiraahdo alliansen (Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna iyo Centern) heystaan iskugeyn taageero dhan boqolkii 39,3.
Dhanka kale Sverigedemokraterna ayaa taageradiisa hoos u dhacday marka loo barbarhdigo cabiraadii tan ka horeysay ee la sameeyey bishii november.
xisbi kale oo taageeradiisa hoos u dhac-weyn ku yimid waa xisbiga Miljöpartiet, xisbigan ayaa doorashadii hore ka helay codad gaaraya 6,9 procent halka hadda xisbiga cabiraadda taageerada ee SCB ka helay 4,7 procent.